ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၁၈)
ပုံကို အကြီးကြီးကြည့်ဖို့ရန် ပုံပေါ်တွင် ကလစ်ထောက်ပါ.
ဤကဲ့သို့ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ မီးရှို့ပျက်စီးတဲ့ ပုံများရှိ၇င် စာရေးသူဆီပို့ပေးပါ
အပေါ်က ပုံကိုကြည့်ပါ. ဒီဘုန်းကြီးတွေဟာ ဘယ်လောက် မိုက်ရိုင်းစော်ကားလည်းဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ အားလုံးတွေ့ရကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. သူတပါး အထွက်အထိပ်ထားရာ ဗလီကို ခဲနဲ့ထု ဆဲဆို ပြီး လူအုပ် ကျင်နဲ့ အနိူ်င်ကျင့်တာကို မိတ်ဆွေတို့ တွေ့ရကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမျိုး ဒီတခါတည်း မဟုတ်ပါ.. ခဏခဏဗလီကို ဖျက်ဆီးပစ်တာ မိတ်ဆွေတို့ တွေ့ရကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗလီကို ဖျက်ဆီးတဲ့အချိန်မှာ ဒီဗလီထဲ၌ နေထိုင်ကြမယ်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေ အနီးအနားဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်ကြမယ့် မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေ ဘယ်လို့နေကြမလဲ စဉ်းစားကြည်ပါအုံး ဘယ်သူက အကြမ်းဖက်တာလဲ..
ခင်ဗျာတို့ပြောတဲ့ မေတ္တာတရားဆိုတာ ဒါလား ခင်ဗျာတို့ ဘုန်းကြီးတွေ လုပ်ပုံကို ခင်ဗျာတို့ကြည့်စမ်းပါအုံး ငနာဘုန်းကြီးတွေ ထောင်ထဲထည့်ပြီး အကုန်အကျဉ်းချထားရမယ်.. ကမ္ဘာက သန်းရွှေအား စစ်ခုံရုံးတင်မည့်ဆိုပါက ဒီဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေကိုပါ စစ်ခုံရုံးတင်ရမည်. သူတို့မြှောက်ပေးလို့ ဒီအစိုးရဆိုတာ ဖြစ်လာတာ.....“
တသက်လုံး ဝေတူမျှတူ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍကို ခွဲဝေစားသောက်ပြီးမှ ဖြစ်သမျှအကုန် နအဖကို အပြစ်တင်တယ်... နအဖကလည်း ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့် လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ရနေတာ.... ဒီဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်မှ နအဖလည်း မရှိမှာ.. ဧကန်အမှန်မလွဲပါ. စာရေးသူတို့ အခု လူစုမိသလောက်စုမိပြီ ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်.
ကျွန်တော်ပြောချင်းတာက ကျွန်တော်လုပ်နေတာက မွတ်စလင်ဘာသာပြန်ပွားအောင် လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး ဒီလို့ပြောလို့ မွတ်စလင်ဘာသာကို ဖျက်ဆီးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမရှိသာလျှင် ဒီနအဖအစိုးရပျောက်မယ်၊ စာရေးသူဘာသာရပ်တိုင်းကို စွပ်စွဲနေတဲ့ စွပ်စွဲမူတွေ ပျောက်မယ်.... စာရေးသူပြောသည့်အထဲမှာ လူသတ်ဖို့ မပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူတွေကို သတ်ဖို့ တလုံးမှ မပါဘူး ဒီဘာသာကို ဖျက်ဆီးဖို့ပဲ လုပ်နိူ်င်မယ်ဆိုရင် မော်စီတုန်းလူမျိုး သူလို စိတ်တူကိုယ်တူ လူအုပ်စုရှိဖို့လိုတယ်.
ဒါမှသာလျှင် ဒီငနာဘုန်းကြီးတွေကို ထောင်ချဖမ်းဆီးပြီး အလုပ်လုပ်ခိုင်း၇မယ်.. နိူ့်မုိ့ဆို ဒီဘုန်းကြီးတွေ သူများကျွေးတာ ကမ်းတာစားပြီး အဆီယစ် နေကြတယ်. သူများဘာသာကို စော်ကားတယ်.. သူ၏သူတောင်းစား သဿနာတိုးတက်ဖို့ မဟုတ်မမှန်တဲ့ နည်းလမ်းများနဲ့ ဆွယ်မယ်။ ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျွန်တော်နှင့် ၀ိုင်းဝန်းဖျက်ဆီးကြပါလို့ ကျွန်တော်အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ....
Posted by messenger at 6:51 PM
Labels: တိရစ္ဆာန်လား လူလား, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ